Sidee ayay dalalka ula dhaqmaan dadka ka soo goosta Daacish? - BBC News Somali
Haween iyo carruur saaran gaari xamuul, kana soo qaxay Baghouz - oo ka mid ah meelihii ugu dambeeyay ee ay Daacish gacanta ku haysay
Shamima Begum, oo ah gabar da'yar oo iskuul ka dhiganeysay magaalada London ee dalka Ingiriiska, taasoo sanadkii 2015 u safartay dalkaasi Suuriya, si ay ugu biirto kooxda Daacish, ayaa loo diiday inay ku laabato dalka UK, sida uus heegay xogayaha arrimaha dibadda.
"Farriinteydu way caddahay," Sajid Javid, ayaa sidaasi u sheegay wargeyska the Times: "Haddii aad taageertay urur argigixiso oo dibadda ah, kama baqi doono inaan ka hortago soo laabashadaada."
Shamima Begum, ayaa ka mid ah kumannaan qof oo u safray dalalka Ciraaq iyo Suuriya, si ay ugu biiraan kooxda Daacish, Haddaba, sidee dalalka kale ee Yurub ay ula dhaqmaan kuwa raba in ay soo laabtaan?.
In ka badan 41,490 qof, oo ka kala socda 80 waddan, ayaa loo maleynayaa inay ku biireen kooxda Daacish ee ka dagaallanta dalalka Ciraaq iyo Suuriya, intii u dhaxeysay bishii April ee sanadkii 2013-kii iyo June,2018, sida lagu sheegay warbixin la daabacay sanadkii hore oo ay soo saartay Xarunta Caalamiga ah ee Baaritaanka Xagjirnimada (ICSR), ee lagu diyaariyay King's College London.
Inta badan xogta xarunta ayaa ku saleysan ilo dowladda ah oo rasmi ah - inkastoo tirade qaar laga soo xigtay qoraallo la daabacay iyo warbixinno ay baahiyeen warbaahinno lagu kalsoonaan karo.
Seddex meelood, dadka ku biiray kooxda Daacish waxay ahaayeen rag, halka dumarka iyo carruurta ay ka yihiin 13%.
Tiro gaareysa 730 carruur ah ayaa loo maleynayaa in laga dhalay hooyooyin ajnabi ah oo dalalka Ciraaq ama Suuriya u tagay si ay ugu biiraan Kooxda Daacish.
Dadka ugu badan ee u safra Ciraaq iyo Suuriya, si ay ugu biiraan kooxda, ayaa ka soo jeeda waddamada Bariga dhexe iyo Waqooyiga Africa (18,852). Sidoo kale waxaa jira dad gaaraya 5,904 oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Galbeedka Yurub, sida ku cad warbixinta.
Imisa ayaa laabatay?
Inta badan dadka dib u soo laabtay ayaa labo xilli soo laabtay - kahor inta aysan kooxdu "khilaafo" ku dhawaaqin sanad kahor bishii June 2014, iyo qayb kale oo soo laabtay horraantii 2015. Qaar badan ayaa la filayaa inay ku dhinteen Ciraaq iyo Suuriya halka kuwo kalena la xiray amaba dalal kale la geeyay.
Wadamada reer galbeedka ayaa waxaa ku soo laabtay 1,765 muwaaddiniin, sida warbixinta lagu sheegay.
Baaritaan uu Baarlamaanka Yurub ku sameeyay lix dal oo Yurub ka tirsan, ayaa lagu ogaaday in kala bar kuwa ka tegay UK ay soo laabteen, tan oo ah tiradii ugu sarreysay lixdaasi dal.
Saddex meelood meel u dhashay dalalka Jarmalka iyo Biljamka ayaa soo laabtay. Faransiiska ayaa waxaa soo laabtay 12%, sida uu sheegay Baarlamaanka Yurub.
Sidee ayaa loola dhaqmaa markay soo laabtaan?
Sida dalalka Yurub loogula dhaqmo dadka ka soo goostay Daacish ayaa ku saleysan baaritaanka dembiyeed iyo qiimeynta khatarta ay leeyihiin. Dhaqancelin ayaa loogu sameeyaa gudaha iyo bannaanka xabsiga.
Tallaabooyinka kale waxaa ka mid ah in dhaqdhaqaaqooda la xaddido, iyo in lagala laabtp baasaboorrada amaba loo diidaba in la siiyo.
Inta badan kuwa ku soo laabtay UK ayaa waxaa wareysi la yeeshay kooxaha ammaanka si ay u ogaadaan waxa ay la kulmeen, khatarta lagala kulmi karo iyo inay helaan dib u dejin.
Haddii uusan qof gelin wax dembi ah, amaba aysan bulshadu dan ugu jirin in la xukumo, waxaa laga yaabaa in dhaqan celin loo sameeyo, taas oo ay ka mid tahay inay dhiirrigelin iyo taageero ka helaan dhaqaatiirta cilmu-nafsiga.
Xafiiska arrimaha gudaha ayaa BBC-da u sheegay in qiyaastii 400 oo qof ay soo laabteen - kuwaasoo badankood soo laabtay goor hore intrii ay dagaalladu bilowdeen, baaritaan ayaana lagu sameeyay. Qaarkood ayaa lagu sheegay inaysan khatar ku ahayn ammaanka.
Sajid Javid, ayaa sheegay in tallaabooyin qaar laga qaado dadka si aysan khaytar ugu noqon ammaanka, kuwaasoo ay ka mid yihiin in laga qaado dhalashada UK.
Faransiiska, si ka duwan sida dalalka Yurub, wuxuu amray in muwaadiniintiisa maxkamad lagu saaro dembiyada ay galeen, sida lagu sheegay warbixinta Baarlamaanka Yurub.
Dhowaan, dowladda Faransiiska waxay qorsheyneysaa inay soo celiso dad badan oo ku biiray Daacish kuna sugan Ciraaq iyo Suuriya.
Ragga ku laabta Jarmalka ayaa had iyo jeer lagu sameeyaa dembi baarid. Balse dacwad oogayaasha ayaa caddeymo badan raadiya kahor inta aysan baaritaan ku sameynin haweenka.
Balse tan waxay is beddeshay bishii December 2017, markii ay ku dhawaaqday in ragga iyo dumarka ku biira Daacish aanan si kala duwan loola dhaqmi doonin.
Dadka looga shakiyo inay ka soo laabteen Daacish ayaa la xiraa waxaana la hor geeyaa garsoore baaritaan ku sameeya. Kuwa la rumeysan yahay inay ku lug lahaayeen xagjirnimo iyo shaqaaleysiin waxaa loo diraa qaybo gaar ah waxaana laga soocaa maxaabiista kale.
Dalka Denmark dagaal yahannada soo laabta ayaa waxaa loo geeyaa qof la taliya, shaqooyin ayaa la siiyaa, waxbarasho, guri, la talin maskaxeed iyo daryeel caafimaad.
UN: Daacish waxay gumaadeysaa dadka rayidka ah ee Moosil
Qaramada Midoobeey ayaa waxay sheegeysaa inay heleyso warar ku saabsan in ururka labaxay Khilaafada Islaamka ay dilayaan dadka shacab ah.